Sheekada filimka Parmanu: John wuxuu la yimid filim heer sare ah isagana aqoonsi lixaad leh ku heli doono – Filimside.net
Sheekada filimka Parmanu: John wuxuu la yimid filim heer sare ah isagana aqoonsi lixaad leh ku heli doono
May 25, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: May 25, 2018
Tan iyo markii Hindiya xurnimo qaateen sanadii 1947 dalkaan caqabado badan ayuu kasoo gudbnay welina jiraan caqabado Hindiya hor yaaliin, balse guushoodii ugu weyneed waxay gaareen sanadii 1998 marka ay ka mid noqdeen dalalka aduunka ugu quwada weyn ee hubka Nugliyeerka heestaan.
Waxaa cajiib ah inaysan horey u dhicin mowduuca Hindiya hubka wax gumaado ku sameesatay inaysan Bollywood-ka kaga hadlin balse John Abraham ayaa ku dhiiraday sheekadan inuu gudaha u dhex galo weliba lacagtiisa iyo jiliinkiisa ayuu filimka Parmanu isugu geeyay asigoo halis weyn u bareeray!
Jilaayaasha: John Abraham, Boman Irani, Diana Penty, Anuja Sathe, Yogendra Tiku.
Director: Abhishek Sharma.
Qiimeynta filimkaan: 4/5 (afar xidig)
Waqtiga uu soconaayo: 130-daqiiqo ama 2-saac iyo 10-daqiiqo
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Parmanu: Sheekada filimkan oo lo dhigay si sahlan oo u qof walbo ku fahmi karo, hadalada la adeegsanayo oo la fahmi karo, bandhiga Classic ah John Abraham la yimid iyo halka saac dambe oo aan indhaha laga qaadi karin.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Parmanu: Halka saac hore xoogaa ma adko sheeko ahaan, sidoo kalena ma lahan muusig ama heeso ka qayb qaadan karaan xiisaha filimkaan.
Fariinta Filimka Parmanu Oo Kooban: Filimkaan wuxuu ku bilaabanaa dood ka socoto xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Hindiya ayadoo laga doodayo sida dalka China ee Hindiya dariska ah u marayaan inay tijaabsadaan Nugliyeerkooda 43-aad balse Hindiya aysan xitaa hal Nugliyeer heesanin.
Ashwat Rana (John Abraham) waa sarkaal dhalinyar balse hankaniisa aad u sareeyo wuxuu la imaanaa qorshe cajiib badan bartamihii 90-maadkii sida Hindiya hubka Nugliyeerka ku sameesan lahaayeen.
Ashwat Rana (John Abraham) oo sidoo kale ka tirsan waaxda cilimi baarista Hindiya ee dhanka hubka qorshihiisa waa laga aqbalaa balse marka xafiiska Ra’iisul wasaaraha la geeyo waxaa laga reebaa fulinta qorshihii uu la yimid.
Sidaa darteed qorshihii Ashwat Rana (John Abraham) ayadoo si fiican loo darsin isagana laga reebay fulinta qorshahan waxaa ka dhalanaayo fashil ah in Hindiya ku guul dareesato inay sameesato hubka Nugliyeerka waxaana ogaanayaan qorshaha Hindiya Satelite-ka Mareekanka waana laga hor tagaa Hindiya inysan hubkaan sameesanin.
Sidaa darteed madaxda sare dalka Hindiya si fashilkaan kalsoonida shacabka aysan ku weynin waxay qaladka dusha u saarinayaan Ashwat Rana (John Abraham) oo loo diiday in fulinta qorshihiisii laga qayb galiyo!
Ashwat Rana (John Abraham) shaqada ayaa laga saaraa kadibna wuxuu iska dagaa magaalada Mussoorie asigoo noqonaayo qof noloshiisa la qaadanayo xaaskiisa Sushma (Anuja Sathe) iyo wiilkiisa Prahlad.
Mudo sedex sano ah Ashwat Rana (John Abraham) wuxuu qabanayaa shaqooyin noloshiisa kaafin karin sumcad ahaana aan u wanaagsaneyn si uu nolosha qoyskiisa u dabaro.
Sanadii 1998 Hindiya isbadal weyn ayaa ka dhacaayo waxaana hogaanka dalka la wareegayo Ra’iisul Wasaaraha cusub Atal Bihari Vajpayee, sidoo kalena xogyaha kowaad ee Ra’iisul Wasaaraha Hindiya waa Himanshu Sharma (Boman Irani) kaasi oo kalsooni weyn ku qabay shaqadii uu hadda ka hor Ashwat Rana (John Abraham) qaban jiray wuuna u yeeraa.
Ashwat (John Abraham) wuu aqbala inuu dalkiisa ka caawiyo tijaabinta iyo ku guuleysiga sameesashada hubka Nugliyeerka.
Ashwat (John Abraham) wuxuu madaxda sare ka balan qaadaa in Hindiya hubka Nugliyeerka heli doonto haddii shaqada isaga 100% loo madax baneeyo sidoo kalena Mareekanka iyo quwadaha kale dunida ogaan doonin sida Hindiya Nugliyeer ku yeelatay.
Ashwat (John) wuxuu sameesanaa koox uu ku kalsoon yahay kana caawiso sida ay Hindiya ugu sameyn lahaayeen hubka Nugliyeerka ayadoon la ogaan waxaana kooxdan ka mid ah Ambalika (Diana Penty), Dr. Viraf Wadia (Aditya Hitkari), Dr. Naresh Sinha (Yogendra Tikku), Major Prem Singh (Vikas Kumar) iyo Purunganathan.
Sidaa darteed qaybaha dambe filimka Parmanu waxaa loo daawan doonaa Ashwat Rana (John Abraham) iyo kooxdiisa sida ay saxaraha Rajasthan gaar ahaan deegaanka Pokhran uga sameenayaan tijaabooyin kala duwan ugu dambeyntiina ugu dhawaaqayaan inay Hindiya hubka Nugliyeerka sameesatay ayadoon dunida ogeyn oo hal mar lagu baraarugaayo hawl galka taariikhiga ah ee Ashwat (John) iyo kooxdiisa ugu guuleesanayaan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Parmanu: Sheekada ay qoreen Saiwyn Quadras, Sanyuktha Chawla Shaikh iyo Abhishek Sharma waa mid heer sare ah oo aad loo fududeeyay qof walbana fahmi karo waana waxa ugu weyn in filimka ay u dhigeen hab la fahmi karo sidoo kalena fariintooda qadiyada wadaninimo udub dhexaad uga dhigeen.
Director Abhishek Sharma Parmanu wuxuu ka dhigay filim aan indhaha laga qaadi karin gaar ahaan halka saac dambe hawl galada dhacaayo iyo sida hubka Nugliyeerka sameyntiisa loogu guuleesanayo.
Parmanu xoogaa halka saac oo hore fariin ahaan ma adko balse nasiib wanaag wax walbo waxaad ku hilmaameysaa halka saac dambe iyo gaar ahaan sida uu filimkaan ku dhamaanayo.
Bandhiga Jilaayaasha: John Abraham wuxuu la yimid bandhigiisii ugu wanaagsanaa ebid waana hubaal in Parmanu uu darajo sare gaarsiin doono waxayna noqon doontaa ceeb weyn haddii abaal marin lagu siin waayo bandhigiisa nololeedka midka ugu wanaagsan, John wuxuu meel iska dhigay awoodii uu shaashada ku adeegsan jiray markaana wuxuu qaatay door caqli, karti iyo wadaninimo ku saleesan.
Diana Penty doorkeeda waa muhiim u ah sheekada Parmanu siweyna loogu amaani karo kaalinteeda ay ku leedahay filimkaan heerka sare ah.
Boman Irani wuu soo laabtay wuxuuna la yimid hadal heyn aan caadi ahayn wuxuu qaatay door adag oo uu amaan lixaad leh ku heli doono waxaana la dhihi karaa ruug cadaagan Bollywood-ka marnaba kama maarmaan.
Dhamaan jilaayaasha kale ee Parmanu doorar ku leh waxay mudan yihiin amaan gaar ah ayagoo ka qayb qaateen xiisaha mashruucaan.
Gunaanad: Director Abhishek Sharma iyo John Abraham waa geesiyaal waxay doorteen fariin aan horey la isugu dayin ayagoo si heer sare ah u sameeyeen, balse waxaa ayaan daro ah filim sidaan u qaali ah inaan xayeysiin balaaran loo sameynin sidoo kalena hadal heyntiisa aysan aad u sareynin.
Taasi waxay sababi doontaa Parmanu fagta hore inuusan dad badan soo jiidanin laakiin sheekadiisa wacan awgeed waa qasab in dadka fiicnaantiisa gadaal isaga sheegi doonaan taasi oo sababi doonto fursad ahaan inuu Boxoffice-ka ka gadmo.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Parmanu:
Waxaa Aqrisay 1,294